बच्चाहरु को लागी 15 सजिलो शिल्प | शिल्प मा
बच्चाहरु को लागी 15 सजिलो शिल्प
इसाबेल कातालान | 05/10/2021 09:00 | शिल्प, बच्चाहरूको लागि शिल्प
के साना बच्चाहरु घर मा बोर छन् र थाहा छैन के गर्न को लागी एक राम्रो समय छ? अर्को पोस्ट मा तपाइँ पाउनुहुनेछ 15 बच्चाहरु को लागी सजिलो शिल्प उनीहरु एक पल मा बनेका छन् र जसको साथ उनीहरु दुबै सृजन प्रक्रिया मा र पछि धेरै रमाईलो को एक धेरै हुन सक्छ, जब उनीहरु शिल्प समाप्त र यो संग खेल्न सक्छन्।
यी शिल्प बनाउन को लागी तपाइँ धेरै सामाग्री किन्नु पर्दैन। वास्तव मा, यदि तपाइँ शिल्प को प्रशंसक हो, तपाइँ पक्कै पनी अघिल्लो अवसरहरु बाट घर मा उनीहरु को धेरै हुनेछ, यद्यपि तपाइँ पनी पुनर्नवीनीकरण सामग्री को लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। यो नछुटाउ!
1 शिल्प लाठी र cardstock संग सजिलो सुपर हीरो
2 बच्चाहरु को लागी पहेली लाग्यो
3 सन्देश संग ढोका घुंडी चिन्ह
4 बच्चाहरूसँग क्रिसमस रेन्डीयर गहना
5 क्रिसमसको लागि रिसाइक्लि। शिल्पहरू। हिममानव
6 बच्चाहरूसँग बनाउनको लागि कार्डबोर्डको घोंघा
7 सजिलो सुँगुर बैंक पाउडर दूध वा यस्तै एक बोतल रिसाइकिलिंग
8 ज्यामितीय आकार टिकट, शौचालय कागज को रोल संग बनेको छ
9 कार्डबोर्ड र क्रेप पेपर पुतली
10 बच्चाहरूको पेन्सिल आयोजक भाँडो
11 कपडा झोलाहरु सुगन्धित क्याबिनेटहरु
12 गर्मी को लागी सजाइएको चप्पल
13 पुनर्नवीनीकरण खेलौना: जादुई बाँसुरी
14 पेन्सिल कीपर बिरालो
शिल्प लाठी र cardstock संग सजिलो सुपर हीरो
बच्चाहरु को लागी सजिलो शिल्पहरु मध्ये तपाइँ यो सरल पाउन सक्नुहुन्छ लाठी र गत्ता संग बनेको सुपर हीरो। तपाइँलाई चाहिने सामग्री एक popsicle छडी, गत्ता, र एक रंगीन मार्कर हो।
यस शिल्प को बारे मा राम्रो कुरा यो हो कि तपाइँ यसलाई केहि मिनेट मा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि बच्चाहरु लाई यो संग खेल्न को लागी सक्षम हुनेछ। यसको अतिरिक्त, यो र choosing्ग र बच्चा को नाम को प्रारम्भिक संग सुपर हीरो को पत्र, उदाहरण को लागी छनौट गरेर निजीकृत गर्न सकिन्छ।
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि यो कसरी गर्ने, पोस्ट नछुटाउनुहोस् लाठी र गत्ता संग बनेको सुपर हीरो.
बच्चाहरु को लागी पहेली लाग्यो
बच्चाहरु को लागी एक राम्रो समय को लागी मनपर्ने खेलहरु मध्ये एक पहेली हो, सबैभन्दा सानो देखि सबैभन्दा जटिल सम्म। पहेली जस्तै कपडा संग बनेको जस्तै मोटर कौशल र इन्द्रियहरु मा काम गर्न को लागी सही छन्, जो बच्चाहरु को लागी उनीहरुको संज्ञानात्मक र शारीरिक क्षमताहरु को विकास को लागी आदर्श हो।
साथै, यो पहेली बनाउन को लागी सजिलो छ र तपाइँ सबै प्रकारका आंकडाहरु बनाउन सक्नुहुन्छ जसको साथ यो सजाउन को लागी। तपाइँ कपडा, कढ़ाई धागा, एक बाक्लो सुई र चिपकने वाला वेल्क्रो, अरुको बीचमा महसुस गर्न आवश्यक छ।
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि यो कसरी कदम बाट गर्न को लागी, पोस्ट हेर्नुहोस् बच्चाहरु को लागी पहेली लाग्यो.
सन्देश संग ढोका घुंडी चिन्ह
यो बच्चाहरु को लागी एक सजिलो शिल्प हो कि तपाइँ केहि सामग्रीहरु संग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ पहिले नै घर मा जस्तै रंगीन गत्ता, क्रेप कागज, कैंची, गोंद र मार्करहरु संग गर्न सक्नुहुन्छ।
यी सबै उपकरणहरु संग तपाइँ यो बनाउन सक्नुहुन्छ झुण्डिएको सन्देश चिन्ह घर को कोठा को knobs मा। के तपाइँ यो कसरी गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ? पोस्ट मा एक नजर राख्नुहोस् सन्देश संग ढोका घुंडी चिन्ह.
बच्चाहरूसँग क्रिसमस रेन्डीयर गहना
बच्चाहरु को लागी सजिलो शिल्प मध्ये एक हुनुको साथै, यो पनि सबैभन्दा बहुमुखी मध्ये एक हो किनकि यो को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ क्रिसमस ट्री आभूषण वा यी मितिहरु को दौरान विशेष कसै को लागी एक ग्रीटिंग कार्ड को रूप मा।
यो धेरै सरल छ कि परिवार को सबै भन्दा सानो यसको तयारी मा भाग लिन सक्छन्। यो बनाउन को लागी तपाइँ केवल कार्डबोर्ड को एक टुक्रा, एक पेन्सिल, एक कालो मार्कर, केहि रंगीन बल र केहि अन्य चीजहरु छन् जुन तपाइँ पोस्ट मा देख्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरूसँग क्रिसमस रेन्डीयर गहना.
क्रिसमसको लागि रिसाइक्लि। शिल्पहरू। हिममानव
बच्चाहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो सजिलो शिल्प को एक र क्रिसमस विषयवस्तु को धेरै विशिष्ट छ कि तपाइँ गर्न सक्नुहुन्छ कार्डबोर्ड स्नोमैन.
तपाइँ केहि खाली कागज रोल, फोम रबर, पोम पोम, महसुस, मार्कर, र केहि अन्य आपूर्ति को आवश्यकता पर्नेछ। नतिजा धेरै राम्रो छ, या त बच्चाहरु को कोठा सजाने को लागी वा एक खेलौना को रूप मा यो केहि समय को लागी आफैलाई मनोरन्जन गर्न को लागी।
यदि तपाइँ यो कसरी गर्ने को सबै चरणहरु हेर्न चाहानुहुन्छ, पोस्ट नछुटाउनुहोस् क्रिसमस को लागी रीसाइक्लिंग शिल्प: स्नोमैन। यो पक्कै तपाइँ मा राम्रो देखीनेछ!
बच्चाहरूसँग बनाउनको लागि कार्डबोर्डको घोंघा
यो सानो घोंघा छिटो सजिलो बच्चा शिल्प गर्न को लागी एक हो। यो साना बच्चाहरु को लागी आफै बाट शिल्प गर्न को लागी सिक्न को लागी र एक सुपर रमाईलो समय हो उनीहरुको कल्पना को विकास को लागी महान छ।
यो घोंघा बनाउन को लागी मुख्य सामाग्री गत्ता हो। पक्कै तपाइँ घरमा धेरै छन्! के तपाइँ उनीहरुलाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न चाहानुहुन्छ? पोस्ट मा बच्चाहरूसँग बनाउनको लागि कार्डबोर्डको घोंघा तपाइँ सम्पूर्ण प्रक्रिया पाउनुहुनेछ।
सजिलो सुँगुर बैंक पाउडर दूध वा यस्तै एक बोतल रिसाइकिलिंग
अब जब नयाँ बर्ष शुरू हुन्छ यो एक राम्रो समय हो बच्चाहरु लाई सिकाउन को लागी उनीहरुको वेतन बचाउन को लागी कि उनीहरु बर्षभरि ट्रिंकेट्स र खेलौनाहरु किन्न सक्छन्।
यो गर्न को लागी एक रमाईलो तरीका यो सिर्जना गरेर हो पिग्गी बैंक पुनर्नवीनीकरण पाउडर दूध को एक बोतल संग। यो बच्चाहरु को लागी एक सजिलो शिल्प को लागी जसको लागी तपाइँ केहि सामग्री को आवश्यकता पर्नेछ: डु boat्गा, एक सानो ऊन, एक कटर र तातो सिलिकॉन।
यदि तपाइँ यो पिग्गी बैंक को निर्माण प्रक्रिया जान्न चाहानुहुन्छ, पोस्ट याद नगर्नुहोस् सजिलो पिगी बैंक रिसाइक्लि milk मिल्क पाउडर प्रकार.
ज्यामितीय आकार टिकट, शौचालय कागज को रोल संग बनेको छ
के तपाइँ साना बच्चाहरु लाई एक रमाईलो र मूल तरीका मा आफ्नो स्कूल को आपूर्ति लाई सजाउन को लागी मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ? त्यसपछि पोस्ट मा एक नजर राख्नुहोस् शौचालय कागज रोलहरूमा स्ट्याम्प गर्न ज्यामितीय आकारहरू किनकि यो बच्चाहरु को लागी सजिलो शिल्पहरु मध्ये एक हो कि तपाइँ केहि सामग्रीहरु को साथ एक फ्ल्याश मा गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ घरमा छ। तपाइँ मात्र मार्कर, केहि शौचालय कागज डिब्बा र केहि नोटबुक को आवश्यकता हुनेछ।
कार्डबोर्ड र क्रेप पेपर पुतली
बच्चाहरु को लागी एक सजिलो शिल्प को अर्को कि तपाइँ एक सानो गत्ता, क्रेप कागज, मार्कर र गोंद संग यो गर्न सक्नुहुन्छ। cardstock र क्रेप कागज पुतली अति राम्रो। यो बनाउन को लागी एक लामो समय लाग्दैन र तुरुन्तै तपाइँ एक सानो गहना संग बच्चाहरु को कोठा सजाउन को लागी हुनेछ।
यो कसरी गर्न को लागी पोस्ट मा हेर्नुहोस् गत्ता र क्रेप कागज पुतली जहाँ यो आउँछ धेरै राम्रो संग कदम द्वारा कदम व्याख्या।
बच्चाहरूको पेन्सिल आयोजक भाँडो
बच्चाहरु क्रेयोन, पेन्सिल र मार्कर को एक ठूलो रकम जम्मा गर्न को लागी रंग छ कि अन्त मा सधैं घर को चारै तिर जान्छ। हराउन बाट बच्न र एकै ठाउँ मा सबै चित्रहरु भएको, यो गर्ने प्रयास गर्नुहोस् बच्चाहरु पेन्सिल आयोजक बर्तन.
यहाँ बच्चाहरु गर्न को लागी सबै भन्दा रमाईलो र रंगीन सजिलो शिल्प को केहि छन्। यसको अतिरिक्त, यसले तपाइँलाई सामग्रीहरु लाई रिसायकल गर्न को लागी अनुमति दिनेछ जुन तपाइँ पहिले नै घरमा छन् बरु उनीहरुलाई फाल्नुको सट्टा।
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी यो शिल्प बनाउन को लागी, पोस्ट याद नगर्नुहोस् बच्चाहरु पेन्सिल आयोजक बर्तन.
कपडा झोलाहरु सुगन्धित क्याबिनेटहरु
यी क्याबिनेटहरु सुगन्धित कपडा पाउचहरु यो बच्चाहरु को लागी एक सजिलो शिल्प हो कि, साना बच्चाहरु लाई एक राम्रो समय दिन को अतिरिक्त, कपडाहरु को लागी एक प्राकृतिक एयर फ्रेशनर को रूप मा पनि काम गर्दछ, जो कपडा गन्ध र आर्द्रता उठाउन बाट रोकिन्छ।
तिनीहरू रंगीन, व्यावहारिक र उपहार को लागी एकदम सही छन्। एकै दिउँसो मा तपाइँ एक सानो कपडा, सुकेको फूल र लेभेन्डर वा दालचीनी सार संग धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ। यस शिल्प बनाउन को लागी सामग्री को बाकी जान्न को लागी, म सिफारिश गर्दछु कि तपाइँ पोस्ट पढ्नुहोस् कपडा झोलाहरु सुगन्धित क्याबिनेटहरु। यो क्याबिनेट खोल्न को लागी एक खुशी हुनेछ!
गर्मी को लागी सजाइएको चप्पल
मार्कर संग केहि सेतो स्नीकर्स सजाउनुहोस् यो बच्चाहरु को लागी तपाइँ गर्न सक्नुहुन्छ को लागी सबैभन्दा सुन्दर सजिलो शिल्प को एक हो। तपाइँ सानालाई एक साधारण डिजाइन को चित्र बनाउन को लागी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँलाई मात्र स्नीकर्स र दुई रातो र हरियो कपडा मार्कर को एक जोडा को आवश्यकता पर्नेछ।
तपाइँ चेरी को डिजाइन बनाउन वा तपाइँको कल्पना को उपयोग गर्न को लागी र एक तपाइँलाई सबैभन्दा मनपर्ने रंग गर्न सक्नुहुन्छ। पोस्ट मा गर्मी को लागी सजाइएको चप्पल तपाइँ यो शिल्प पुन: सिर्जना गर्न को लागी भिडियो पाउनुहुनेछ। यो नछुटाउ!
पुनर्नवीनीकरण खेलौना: जादुई बाँसुरी
कहिले काहिँ सरल खेलौनाहरु हो कि बच्चाहरु लाई धेरै मनपर्छ एक रमाईलो र मनोरन्जन समय छ। यो को मामला हो जादुई बाँसुरी, बच्चाहरु को लागी एक सजिलो शिल्प हो कि तपाइँ केहि मिनेट मा गर्न सक्नुहुन्छ।
यो खेलौना बनाउन को लागी तपाइँ पुनर्नवीनीकरण सामग्री को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ केहि घरमा हुनुहुन्छ सोडा चुस्न को लागी पराल वा पराल। र यदि तपाइँ उनीहरु संग छैन, तपाइँ उनीहरुलाई कुनै सुपरमार्केट मा पाउन सक्नुहुन्छ।
स्ट्रॉ बाहेक तपाइँ पनी टेप वा टेप को एक बिट को आवश्यकता पर्नेछ। अर्को विकल्प गोंद हो, तर यदि तपाइँ टेप को लागी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ म यो सिफारिश गर्दछु किनकि यो धेरै राम्रो, गर्न को लागी सजिलो र अझ सुरक्षित हुनेछ। तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ मात्र चीजहरु को एक जोडा को जरूरत छ!
पेन्सिल कीपर बिरालो
यदि तपाइँ रिसायकल गर्न चाहानुहुन्छ, बच्चाहरु को लागी सजिलो शिल्प को एक कि तपाइँ यो गर्न सक्नुहुन्छ पेन्सिल राख्ने बिरालो शौचालय कागज को गत्ता रोल संग कि तपाइँ घरमा छ। बाँकी को लागी, तपाइँ केहि मार्करहरु, कैंची को एक जोडी, एक सानो गोंद र केहि शिल्प आँखा बाहेक धेरै सामग्री को आवश्यकता पर्दैन।
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी यो प्यारो बिरालो कदम बाट कदम बनाउन को लागी, पोस्ट याद नगर्नुहोस् पेन्सिल कीपर बिरालो.
Este रिंगहरुको सेट यो बच्चाहरु को लागी सजीलो शिल्पहरु मध्ये एक हो कि तपाइँ सामग्रीहरु संग तपाइँ घर मा बनाउन सक्नुहुन्छ। एक सानो गत्ता, भान्छा कागज, मार्कर र गोंद को एक गत्ता रोल यो रमाईलो खेल जसको साथ तपाइँ घर भित्र वा बाहिर केहि खेल खेल्न सक्नुहुन्छ बनाउन को लागी पर्याप्त हुनेछ।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि यो छल्लो को सेट कसरी बनाईन्छ? पोस्ट मा एक नजर राख्नुहोस् रिंगहरुको सेट जहाँ तपाइँ विस्तृत निर्देशन पाउनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: शिल्प अन » शिल्प » बच्चाहरूको लागि शिल्प » बच्चाहरु को लागी 15 सजिलो शिल्प
हेलोवीन मा हाम्रो घरहरु लाई सजाउन4विचारहरु